Madaxweynihii Zambia oo Geeriyooday - Wargeyska Faafiye
Home 2014 October 29 .Warka Madaxweynihii Zambia oo Geeriyooday
Madaxweynihii Zambia oo Geeriyooday
October 29, 2014 · by	Liban Farah ·
Madaxweynaha Zambia Michael Sata ayaa ku geeriyooday magaalada London, halkaas oo laga daweynayey xanuun aan weli la shaacin. Da’diisa waxay ahayd 77 jir.
Xoghayaha Golaha Wasiirada ee Zambia Roland Msiska ayaa manta oo Arbaco ah xaqiijiyey in Mr Sata uu geeriyooday shaley gelinkii dambe.
Toddobaadkii hore, xafiiska madaxweynaha ayaa sheegay in Mr Sata uu dalka dibeddiisa ugu ambabaxay baaris caafimaad, laakiin ma jirin faahfaahin dheeri ah oo uu xafiisku bixiyey.
Xaaladdiisa caafimaad ayaa tan iyo bishii July laga muujinayey walaac, kadib markii uu socdaal uu isku soo daweynayo ku tegey Israel, wixii intaa ka dambeyseyna muddo saddex bilood ah laguma arkin meel fagaare ah.
Bishii la soo dhaafey waxaa uu hor imaan waayey shirkii Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ee New York oo uu khudbad ka jeedin lahaa, waxaana xiligaas booliska ay saxaafada u sheegeen in dhakhaatiirta Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Mareykanka.
Mr. Sata waxaa uu Zambia hoggaaminayey tan iyo sannadkii 2011 oo uu ku guuleystey doorashadii madaxtinimada ee soo afjartey taladii Xisbiga Movement for Multiparty Democracy oo muddo labaatan sanno waddanka soo xukumayey
A/Sunna: Labo qof oo la qisaasay
Afar qof oo ku dhimatay shil gaari
Kenya oo joojisay duulimaadyadii G/Africa.
Alleged ISIS recruit Adnan Farah changes plea to guilty.
Wariye toogasho lagu dilay: Muqdisho